Dhamma Yanant: July 2009
9:27 AM | Author: Dhamma Yanant
အရည ဂတော ဝါ - တောအရပ်သို့ ကပ်၍သော်လည်းကောင်း၊
ရုက္ခမူလ ဂတော ဝါ - သစ်ပင်ရင်းသို့ ကပ်၍သော်လည်းကောင်း၊
သုညာဂါရ ဂတော ဝါ - ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်သို့ ကပ်၍သော်လည်းကောင်း- ဆိုပြီး တရားအားထုတ်ရန် နေရာတွေကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်။
သက်တမ်းကတို၊ အချိန်ကနည်း၊ လုပ်စရာတာဝန် ဝတ္တရားတွေကများ၊ စွဲမက်စရာ အာရုံတွေကပြည့် - ဒီကြားတွေထဲမှာ ညပ်နေရတဲ့ ယနေ့ခေတ် လူတွေအဖို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့များ တောအရပ်ကို ကပ်နိုင်ပါ့မလဲ၊ သစ်ပင်ရင်းကို ကပ်နိုင်ပါ့မလဲ၊ ဒါ့အပြင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဆူဆူညံညံတွေ ပေါများလာရာမှာ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်တွေကလည်း တစ်နေ့တခြား ရှားပါးလာပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် တရားအားထုတ်စရာ နေရာမရှိ၊ အချိန်မရှိလို့ အားမထုတ်ရတော့ဘူးလား။ တရားမရကြတော့ဘူးလား။ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ ဘာဝနာအလုပ်ပါ။ ဘာဝနာဆိုတာ ကိုယ်၊ နှုတ်နဲ့ ပွါးရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်နဲ့ပွါးရတဲ့ မနောကံအလုပ်ပါ။ စိတ်ဖြစ်ဖို့ အချိန်လည်း မလို၊ နေရာလည်း မလိုပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ဘာ့ကြောင့် အရညဂတောဝါ စသဖြင့် တရားအားထုတ်ဖို့ နေရာတွေကို (မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာ မဟုတ်ပါဘဲနဲ့) ဗုဒ္ဓက ညွှန်ပြခဲ့ရတာပါလဲ။ အာရုံတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို မတော်လှန်နိုင်သူတွေအတွက် ညွှန်ပြခဲ့တာပါ။ ပင်ကိုယ်အားဖြင့်ကိုက နှစ်သက်စရာ အာရုံတွေ၊ ခေတ်နဲ့အညီ မကြိုက်ကြိုက်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ နှစ်သက်စရာ အာရုံတွေ.. ဒီလို အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့ အာရုံတွေကနေ ဝေးဝေးနေနိုင်စေဖို့၊ ရှောင်နိုင်စေဖို့ (အာရတီဖြစ်စေဖို့) ညွှန်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကို အာရုံအလို မလိုက်စေဘဲ၊ အာရုံကိုသာ စိတ်အလိုလိုက်နေစေနိုင်ရင် ဘယ်အချိန်၊ ဘာနေရာမှ မလိုတော့ပါဘူး။
တစ်စုံတစ်ခုကို လိုချင်ရင် တစ်စုံတစ်ခုကို ပေးဆပ်ရမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဥစ္စာမှ အလကားမရပါဘူး။ မိမိတို့ ဘ၀မှာ အများဆုံး ပေးဆပ်လိုက်ရတာက အချိန်တွေပါ။ မွေးကတည်းက ပေးဆပ်လာခဲ့လိုက်ရတာ။ ပေးရဖန်များလွန်းလို့ လက်ကျန်အချိန်ဆိုတာတောင် မရှိတော့သလောက်ပါပဲ။ သီးသန့်အချိန်မရှိတော့မှတော့ ကြားဖြတ်အချိန်ယူရုံပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လို ကြားဖြတ်ကြမလဲ။
မိမိတို့ နေ့စဉ်ပြုနေကြ အလုပ်ချိန်တွေထဲမှာ ကုသိုလ်စိတ်ကလေး ကြားခိုလိုက်ရုံပါပဲ။ ချက်ရင်း ပြုတ်ရင်း၊ လျှော်ရင်း ဖွပ်ရင်း၊ သွားရင်း လာရင်း၊ တွက်ရင်း ချက်ရင်း၊ လုပ်ရင်း ကိုင်ရင်း၊ ပြေးရင်း လွှားရင်း၊ မောင်းရင်း နှင်ရင်း၊ ပြောရင်း ဆိုရင်း.... အနည်းဆုံး အကျိုးစီးပွားကို လိုလားတဲ့ မေတ္တာစိတ်ကလေး ကြားခိုနိုင်ပါတယ်။ ဂုဏ်တော်တွေ ပွားများတဲ့ စိတ်ကလေး ကြားခိုနိုင်ပါတယ်။ လုပ်လိုက်သမျှကို လိုက်လိုက်သိနေတဲ့၊ မမြဲတဲ့ သဘောကို သိသိပေးနေတဲ့ ဝိပဿနာ စိတ်ကလေး ကြားခိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ဝိပဿနာ စိတ်ကလေး ကြားခိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် တရားထူးရပြီး သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ အရိယာ ဖြစ်သွားသူတွေ မနည်းလှပါဘူး။ ဆီမီးထွန်းရင်း၊ ခြေဆေးရင်း၊ ထမင်းချက်ရင်း၊ ဟင်းရွက်ကြော်ရင်း၊ နွားကျောင်းရင်း၊ သင်္ဘောစီးရင်း… စသဖြင့် ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကြရင်း အရိယာဖြစ်သွားသူတွေ မရေမတွက်နိုင် များစွာပါ။ ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်အခါက သာဝတ္ထိပြည်မှာ လူဦးရေ (၇)ကုဋေရှိတဲ့အထဲမှာ (၅) ကုဋေက အရိယာတွေပါ။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အိမ်ယာတည်ထောင် လူ့ဘောင်မှာနေပြီး မိမိအလုပ် မိမိလုပ်ရင်းက အရိယာဖြစ်အောင် ကုသိုလ် ကြားခိုနိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ သာသနာမှာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ အနာထပိဏ်၊ ဝိသာခါတို့ဆိုတာလည်း ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်လုပ်နေကြတဲ့၊ အောင်မြင်စွာ ကြားခိုနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ကုန်သည်အရိယာကြီးတွေပါ။
ဒါ့ကြောင့် မိမိတို့အနေနဲ့ တရားအားထုတ်ဖို့ အချိန်နည်းလို့၊ ရိပ်သာမှာ စခန်းသွားမ၀င်နိုင်လို့ စိတ်မဆင်းရဲပါနဲ့။ အားထုတ်ချင်စိတ် ရှိဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်တိုင်းမှာ အချိန်တိုင်း သတိမကပ်နိုင်တောင် (အကုသိုလ်လုပ်နေရင်တောင်မှ) သတိရလိုက်တဲ့အချိန် ကုသိုလ်စိတ်ကလေး ကြားဖြတ်ဝင်တတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အခု သတိရရင် အခု ကုသိုလ်စိတ်လေး ကြားခိုလိုက်ပါ။ ကြားခိုထားတဲ့ ကုသိုလ်လေးတွေ များများလာရင် ကုသိုလ်အစုအပုံကြီး ဖြစ်လာပါမယ်။ ကုသိုလ်အစုအပုံကြီးက ပေးလာတဲ့အကျိုးဖြစ်မှတော့ သံသရာမှာ ထောက်ရာရပြီပေါ့။
အဲ... တစ်ခုတော့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ။ ရှားရှားပါးပါး ကုသိုလ်ပြုနေချိန်မှာတော့ အကုသိုလ် ကြားခိုမလာစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အကုသိုလ်ဆိုတာမျိုးက သိပ်လျင်ပါတယ်။ ၀င်ဖို့လည်း အမြဲချောင်းနေပါတယ်။ အထူးအားထုတ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ အမြဲတမ်းလိုလို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်နေတတ်ပါတယ်။ သတိအစောင့် လစ်ရင်လစ်သလို နေရာယူထားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကုသိုလ်ကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ရင်း ကုသိုလ်ကိုပဲ ကြားခိုခွင့်ပေးလိုက်ပါ...။ ကြားခိုတတ်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါ.....။
article | comments (1)
6:10 PM | Author: Dhamma Yanant
ဘဝသံသရာဆိုတာ အလွန်ပဲ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ ဘဝတစ်ခုမှာ လင်မယား တော်စပ်ပေမယ့် တခြားဘဝတစ်ခုမှာတော့ မောင်နှစ်မ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။ မိဘ၊ သားသမီး တော်ခဲ့ဖူးသူလည်း လင်မယား တော်ရင်တော်ကြရပြန်ပါတယ်။ ဘဝတစ်ခုတည်းမှာသာဆိုရင်တော့ အလွန်ကို ကဲ့ရဲ့စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ဘဝဆိုတဲ့ နံရံတစ်ခုက ခြားကွယ်ထားတဲ့အခါကျတော့ မိမိတို့အနေနဲ့ ဘာကိုမှ သတိမရ သံဝေဂမရနိုင်တော့ဘဲ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး ခံစားစံစားမိကြပါတယ်။
ဒီဘ၀တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဘ၀ထင်ပြီး လက်ရှိဆုံတွေ့ရသူတွေအပေါ်မှာပဲ အတင်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ သံယောဇဉ်ကြီးကြပါတယ်။ ''သံသာကမ်းတိုင် တူယှဉ်ပြိုင် ကူးမယ်'' လို့ ရည်ရွယ်ပြီး ''ဒီလင်၊ ဒီမယား၊ ဒီသား၊ ဒီသမီးတို့နဲ့ ဘဝဆက်တိုင်း ဆုံတွေ့ရပါလို၏'' စသည်ဖြင့် ''ဒီ…၊ ဒီ…၊ ဒီ… ချင်းထပ်အောင်'' ဆုတွေတောင်းကြပါတယ်။ တချို့များ နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်း ဆိုတာတောင်မှ ပါလိုက်ပါသေးတယ်။ တော်တော်လည်း အစွဲအလမ်းကြီးကြပါတယ်နော်။ အတိတ်အတိတ်ဘ၀တွေက (တခြားလူတွေနဲ့) အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ရွတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆုတောင်းတွေ၊ ထားခဲ့ဖူးတဲ့ သစ္စာတွေကိုများ ပြန်ကြားယောင်နိုင်စွမ်းရှိရင် (ငယ်တုန်းက အကြောင်းအရာတွေကို ကြီးမှပြန်တွေးမိရင် ပြုံးဖြစ်သလိုမျိုး) ပြုံးရုံပဲ ပြုံးမိမလား၊ ၀ါးလုံးကွဲပဲ ရယ်ချမိမလား။ သေချာတာကတော့… ငါ့နှယ်.. အခုမှ တကယ်ချစ်ခင်တွယ်တာမိတာကို အဲဒီ့တုန်းက ဘာလို့များ ဆုတောင်းမိပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်မှာပါပဲ။ သံဝေဂတော့ မရလောက်ပါဘူး။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိဒဏ်ရာကိုပဲ အနာဆုံး ထင်တတ်ကြတာပါ။
သတ္တဝါတွေရဲ့ စေတနာကံဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ထပ်တူဖြစ်ဖို့ အလွန်ပဲ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သတ္တဝါအနန္တနဲ့ နှိုင်းစာရင် အတူတူ သေရသူ ရှားပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်း သေသူရှားသလို နောက်ဘဝမှာလည်း လူစသည် အတူတူပြန်ဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ ''ငှက်ဖြစ်ရင်လည်း တစ်ကိုင်းတည်းနား'' ချင်သူများအတွက် ရိုးရိုးငှက်နဲ့ ဇောက်ထိုးနေတဲ့ လင်းဆွဲငှက်ဖြစ်နေရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား။ ငှက်တော့ ဖြစ်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ငှက်ကြီးဝန်ပိုနဲ့ နှံပြည်စုတ်ငှက် ဖြစ်နေကြရရင်ရော…?။ သတ္တ၀ါတွေ ဘဝရချိန် ကွာခြားသလောက် အသက်အရွယ်စတာတွေလည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဇနီးမောင်နှံ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကညာပျိုနဲ့ ဇရာအို ဖြစ်နေတာတို့၊ တစ်မိသားစုတည်း ဖြစ်နေတာတို့၊ ယောက်ျားအတူတူ ဖြစ်နေတာတို့၊ မိန်းမအတူတူ ဖြစ်နေတာတို့ စတာတွေပါ။
တွယ်မိတွယ်ရာ တွယ်တတ်တဲ့ နွယ်ရိုင်းနဲ့တူတဲ့ ''တဏှာ''ဟာ အလွန်ပဲ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီဘဝ ဒီမိသားစုကို တွယ်သလို နောက်ဘဝ နောက်မိသားစုကို ထပ်တွယ်ချင်ပြန်ပါတယ်။ အရင်ဘ၀ အရင်မိသားစုကိုလည်း တွယ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ နီးစပ်ရာကို တွယ်ပါတယ်။ မဖြေမလွှတ်ချင်၊ မြဲမြံစွာ တွယ်ပါတယ်။ သံသရာပါအောင် တွယ်ချင်ပါတယ်။ စွဲလမ်းမှုကို မလွှတ်ချင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဆိုတဲ့ ဆုတောင်းတွေ ဖြစ်လာရတာပါ။ တဏှာရဲ့ တန်ခိုးကြောင့်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဒဏ်ရာရမှန်းမသိ အရခံပြီးတော့ကို သံယောဇဉ်ကြီးမိကြပါတယ်။ ကြင်နာတာတွေ၊ နာကျင်တာတွေ... ဆိုတာ တဏှာရဲ့ အစွယ်တွေပါ။ ကိုယ်မှာ ဒဏ်ရာမရှိမှ ကိုယ်စွမ်းအားပြည့်ပြီး ရန်တွေကို နှိမ်နင်းနိုင်သလို စိတ်မှာလည်း ဒဏ်ရာမရှိမှသာ စိတ်စွမ်းအားပြည့်ပြီး ကိလေသာရန်တွေကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါမယ်။ တဏှာကို ရဟန္တာဖြစ်မှသာ အကြွင်းမဲ့ ပယ်သတ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ မိမိတို့အနေနဲ့ကတော့ ထိထိမိမိကြီး အကိုက်မခံရအောင်သာ သတိနဲ့ ကြည့်ရှောင်နေဖို့ပါပဲ။
ပြန်ကိုဆုံချင်ပါသေးတယ် ဆိုသူများအဖို့ ဆုတောင်းစရာ မလိုတဲ့၊ စိတ်ထင့်စရာ မလိုတဲ့၊ ဒဏ်ရာမပေးတဲ့၊ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့၊ သေချာပေါက် ပြန်ဆုံနိုင်တဲ့ နည်းရှိပါတယ်။ ဘဝတိုင်း ဆုံတွေ့နိုင်စရာ အကြောင်း(၄)ချက်ရှိတယ်လို့ နကုလပိတာနှင့် နကုလမာတာတို့ကို ဗုဒ္ဓရှင်တော် ဟောဖော်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
(၁) တူညီတဲ့ သဒ္ဓါတရားရှိခြင်း၊
(၂) တူညီတဲ့ သီလရှိခြင်း၊
(၃) တူညီတဲ့ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုရှိခြင်း၊
(၄) တူညီတဲ့ ဥာဏ်ပညာရှိခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံရင် ဘဝတိုင်း ဆုံနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်ကြည့်ရင် ဒီအကြောင်းတွေ ချို့တဲ့ရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ သစ္စာပန္နက်ရိုက်ရိုက်၊ ဆုတွေတောင်းတောင်း မဆုံတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
တစ်စက္ကန့်မှာ ကုဋေတစ်သိန်းခန့် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ စိတ်စေတနာတွေဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အခါခပ်သိမ်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် နောင်ဘဝ ပဋိသန္ဓေကို အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ ကံဆိုတာကလည်း ယခုတစ်ဘဝတည်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ကံတွေချည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘဝဘဝက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဆိုး၊ အကောင်း ကံပေါင်းများစွာကလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အခွင့်သာရင် သာသလိုလည်း ၀င်ပြီးအကျိုးပေးနေကြပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ပုထုဇဉ်တွေအတွက် ဘာမှထောက်တည်ရာမရ၊ ကံပစ်ချရာ မျောနေကြရတဲ့ ဘဝပင်လယ်ကြီးမှာ မိမိတို့အနေနဲ့ တဏှာရဲ့ ဖြားယောင်းမှုကြောင့်သာ အကြောက်အလန့်မရှိ ဆုတွေတောင်းပြီး မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ကျင်လည်ချင်နေကြတာပါ။
ဗျာဒိတ်ခံပြီးချိန်ကစပြီး နိဗ္ဗာန်ရမယ့် နောက်ဆုံးဘဝအထိ လက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ ဘုရားလောင်း သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားနဲ့ ယသောဓရာ၊ အရှင်မဟာကဿပလောင်း ပိပ္ပလိလုလင်နဲ့ ဘဒ္ဒကာပိလာနီ (သူတို့နှစ်ယောက် လမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့အခါ ကမ္ဘာမြေကြီးကတောင် ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်) တို့တောင်မှ အသင်္ချေ ကမ္ဘာချီတဲ့ ဘဝတွေမှာ သူတို့တွေ တွေ့ဆုံ ပေါင်းသင်းကြရတဲ့ ဘဝတွေက အလွန်ဆုံး ရာ၊ထောင်ခန့်ပဲ ရှိပါတယ်။ မတွေ့မဆုံ၊ မပေါင်းသင်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝတွေက မရေမတွက်နိုင် များစွာပါ။
ဒီတော့… ဗုဒ္ဓရဲ့ စကားတော်ဆိုတာ မှားရိုးထုံးစံ မရှိပါဘူး။ ပြန်ဆုံကြောင်းတရားတွေနဲ့ ပြည့်စုံရင် ပြန်ဆုံဖို့ ဆုတောင်းစရာမလိုပါဘူး။ အလိုလိုကို ပြန်ဆုံရမှာပါ။ ''နိဗ္ဗာန်မရမချင်း သံသရာ ခရီးတစ်လျှောက် ထာဝရ လက်တွဲနိုင်ရပါလို၏။ နောင်ဘဝဆက်တိုင်းမှာလည်း ဒီလင်၊ ဒီမယား အဖြစ်နဲ့သာ ပေါင်းသင်းနိုင်ရပါလို၏' စတဲ့ ဆုတောင်းတွေဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဒုက္ခရောက်ရတတ်ပါတယ်။ အဆိပ်အတောက်မကင်းတဲ့ ဆုတောင်းတွေ ဖြစ်လို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သံသရာ ဝဋ်ဒုက္ခက မလွတ်နိုင်သေးသမျှ ဘဝဆက်တိုင်း "ဆုံနိုင်ခွင့်"ကို မျှော်လင့်ကြသူများအဖို့ ဆုတောင်းမမှားမိစေဖို့၊ ပြန်ဆုံကြောင်းတရားတွေကိုပဲ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြစေဖို့၊ ဆုတောင်းမှားခဲ့ကြသူများကိုလည်း သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ကြစေဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း…..။
10:07 AM | Author: Dhamma Yanant
လောကမှာ အမှန်တရား (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။ မရှိမှန် သမုတိသစ္စာ နဲ့ အရှိမှန် ပရမတ္ထသစ္စာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမုတိသစ္စာဆိုတာ လောကမှာ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆို သိမှတ်နေသမျှသော ပညတ်တရားတွေပါ။ လောကနယ်ပယ်မှာ စကားပြောဖြစ်စေဖို့ မရှိမဖြစ် သမုတ်ထားတဲ့ အမှန်တရား ဖြစ်ပါတယ်။ လူအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြရာမှာ စကားပြောတဲ့အပိုင်းနဲ့ နားလည်တဲ့အပိုင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပညတ်ဆိုရာမှာလည်း စကားပြောဖို့ သဒ္ဒပညတ်နဲ့ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ အတ္ထပညတ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အရာဝတ္ထု တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ကိုယ် အမည်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဆိုင်ရာ ဘာသာမှာတော့ မှန်နေပါတယ်။
ဥပမာ- ခွေးကိုပဲ မြန်မာက ခွေး၊ အင်္ဂလိပ်က ဒေါ့ဂ်၊ ဂျပန်က အိနု၊ သီဟိုဠ်က ဗလ်လ၊ ပါဠိက သာ၊ သုနခ၊... စသည်ဖြင့် မိမိတို့ ဘာသာအလိုက် အမည်သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်တော့ မှန်ကြတာချည်းပါ။ ဒါကို ကိုယ့်စကားမှ အမှန်ဆိုပြီး ငြင်းခုံနေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လောကမှာ အငြင်းအခုံဖြစ်လိုက်သမျှဟာ ပညတ်တရားတွေကြောင့်ချည်းပဲ များပါတယ်။ ကိုယ့်ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ မှန်ကန်ကြတာာပဲ ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီ့ပညတ်တရားတွေဆိုတာ တကယ်မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မရှိမှန် အမှန်တရားတစ်ခု ဖြစ်ရတာပါ။
ဥပမာ- ခွေးဆိုတာကို စိစစ်ကြည့်ရင် စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ခွေးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စကားပြောဆိုတဲ့အခါ အရာအားလုံးကို စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်ချည်းပဲ ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူး။ နားထောင်တဲ့သူလည်း ဆိုလိုချက်ကို နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံး ရှုပ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူလူချင်း ဆက်ဆံရာမှာ နားလည်နိုင်အောင်၊ စကားပြောလို့ဖြစ်အောင် အမည်အမျိုးမျိုး သတ်မှတ်ထားရပါတယ်။ ဒါက အမည်နာမ သမုတ်ထားရတဲ့ သမုတိသစ္စာရဲ့ သဘောပါ။
ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကတော့ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်၊ နိဗ္ဗာန်တရားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ တကယ်တမ်းရှိတာက စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်တွေပါ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာက လောကမှ လွန်မြောက်သွားတဲ့ အရှိတရားပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အထွတ်အထိပ် ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်အရှိတရားကို ရောက်ဖို့ဆိုရင် တကယ်မရှိတဲ့ ပညတ်တရားတွေနဲ့ သွားလို့ မရောက်နိုင်ပါဘူး။ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်ဆိုတဲ့ ရုပ်၊ နာမ်တရားတွေရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှု မမြဲတဲ့၊ ဆင်းရဲတဲ့၊ အစိုးမရတဲ့ သဘောတွေကို သတိ၊ ဥာဏ်တို့နဲ့ ရှုမှတ်သိမြင်နိုင်မှသာ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မမြဲတဲ့ ဒီရုပ်၊ နာမ်တွေကိုမြင်မှ မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကို မြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ သေခြင်းမရှိ၊ ရွေ့ခြင်းမရှိတဲ့ အစ္စုတတရားဖြစ်လို့ မြဲပါတယ်။
(၁) သူတော်ကောင်းကို မှီဝဲဆည်းကပ်ရမယ်။
(၂) သူတော်ကောင်းတရားကို ကြားနာရမယ်။
(၃) သင့်တင့်အောင် နှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်။
(၄) တရားကို တရားအားလျော်စွာ ကျင့်သုံးတတ်ရမယ်။
ဒီလေးချက်ထဲမှာ လေးခုမြောက်အချက်က လိုရင်းအချုပ်ပါ။ "တရားကို တရားအားလျော်စွာ" လို့ဆိုရာမှာ ရှေ့တရားက မိမိလိုလားတဲ့ ကိစ္စကိုပြပြီး နောက်တရားက မိမိလိုလားတဲ့ကိစ္စနဲ့ လျော်ညီအောင် ကျင့်သုံးရမယ့် အလုပ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လိုလားတဲ့ ကိစ္စက နိဗ္ဗာန် ဆိုရင် ကိစ္စနဲ့ လျော်ညီတဲ့ အလုပ်က ၀ိပဿနာအလုပ် ရပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာက ပရမသုညတသဘော (လွန်မြတ်တဲ့ ဆိတ်သုဉ်းမှု)ပါ။ ဒီ ပရမသုညတ အရှိပရမတ်သဘောဆီကို ခေါင်းကိုယ်ခြေလက် နိမိတ်ပညတ် မရှိတရားနဲ့ သွားလို့မရပါဘူး။ အရှိဆီကို အရှိတရားနဲ့ "အရှိကို အရှိအတိုင်း" သွားမှပဲ ရောက်နိုင်ပါမယ်။
(၁) ကိလေသာဆိုတာ ပညတ်ကို အာရုံပြုပါတယ်။ (သူသူငါငါ အကြောင်းအရာတွေကို အာရုံပြုပါတယ်။)
(၂) ဝိပဿနာက ရုပ်၊နာမ်ကို အာရုံပြုပါတယ်။
(၃) မဂ်၊ဖိုလ်က နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုပါတယ်။
ပညတ်ကို အာရုံပြုတဲ့ ကိလေသာနဲ့ မဂ်၊ဖိုလ်ကို မရနိုင်ပါဘူး။ ရုပ်၊နာမ်ကို အာရုံပြုတဲ့ ဝိပဿနာနဲ့မှပဲ မဂ်ဖိုလ်ကို ရနိုင်ပါတယ်။ မဂ်၊ဖိုလ်ရမှသာလျှင် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လောကမှလွန်မြောက်တဲ့ အရှိပရမတ်တရားကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် လောကထဲက အရှိပရမတ်တရားတွေရဲ့ ဖောက်ပြန်မှုသဘောကို ရှုရတဲ့ သတိပဋ္ဌာန်လမ်း၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လမ်း စသည်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူထားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ လမ်းတစ်လမ်းကို ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းရပါမယ်။
နိဗ္ဗာန်ဟာ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတဲ့ ကာလသုံးပါးကလွတ်တဲ့ ကာလဝိမုတ်တရား ဖြစ်ပါတယ်။ ပညတ်ဆိုတာလည်း ကာလဝိမုတ်တရားပါ။ ဒါပေမယ့် ပညတ်က တကယ် မရှိတဲ့အတွက်ကို ကာလဝိမုတ် ဖြစ်ရတာပါ။ နိဗ္ဗာန်ကတော့ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ ကာလဝိမုတ်တရား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ ကာလဝိမုတ်တရားဆီရောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်၊ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ ရုပ်နာမ်တရားတွေကို အမှန်တယ်ရှိတဲ့ ကာလဝိမုတ်တရားနဲ့ နီးစပ်စေနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကာလသုံးပါးက ကာလတွေကို လျှော့ပစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အဲဒီ့လို လျှော့တဲ့အခါ ပစ္စုပ္ပန်ကာလက ဖြစ်ဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် လျှော့ပစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အတိတ်ကာလနဲ့ အနာဂတ်ကာလတွေကတော့ ဖြစ်ပြီးဖြစ်လို့ရယ်၊ မရောက်သေးလို့ရယ်ကြောင့် လျှော့ချပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ အတိတ်၊ အနာဂတ် ရုပ်၊ နာမ်တွေအပေါ် ကျရောက်နေတဲ့၊ စွဲလမ်းနေတဲ့၊ မျှော်လင့်နေတဲ့ အစွဲတွေ၊ အမျှော်တွေကို ဖြုတ်ပစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အတိတ်ကို မပြန်ဘဲ၊ အနာဂတ်ကို မကြံဘဲ နှလုံးမသွင်းဘဲ နေရပါမယ်။ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် ရှုခြင်းဖြင့်သာ ကာလဝိမုတ် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုတည်းသော ကာလဖြစ်တဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရုပ်၊နာမ်တရားတွေအပေါ်မှာလည်း နှစ်သက်မှု၊ မနှစ်သက်မှု မဖြစ်စေဘဲ ရုပ်၊နာမ်တွေရဲ့ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှုကိုပဲ မလွတ်တမ်းသိနိုင်အောင် ကြိုးစားနေရပါမယ်။ အဲဒီ့လို ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ အရှိတရားတွေကို ဖောက်ပြန်တဲ့ အရှိသဘောအတိုင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမှသာလျှင် မဖောက်ပြန်တော့တဲ့ အရှိတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့အနေနဲ့လည်း မရှိပညတ်နယ်ထဲမှာ မောဟဖိစီး အအိပ်ကြီးအိပ်ခဲ့ကြ၊ အမေ့ကြီးမေ့ခဲ့ကြ၊ ကာမဂုဏ်အာရုံတွေမှာ အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ကြလို့ "နတ်ပြည်တစ်ချက်၊ ခွေးဝက်တစ်ဖုံ၊ နတ်ဘုံတစ်နဲ(နည်း)၊ ငရဲခါခါ၊ ပြိတ္တာတန်တန်၊ ဒုက္ခဒဏ်အမျိုးမျိုး၊ ဆင်းရဲအောက်မှာ၊ ဒူးထောက်ခါသာ၊ အဖြာဖြာသား၊ ခံရများ၏" ဆိုသလိုပဲ အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ သံသရာခရီးရှည်ကြီးထဲမှာ စုန်တစ်ချည် ဆန်တစ်ပြန်၊ မြုပ်တစ်ခါ ပေါ်တစ်လှည့် အမောကြီး မောခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အခုအခါမှာတော့ တရားရှိန်နေမင်း ထွန်းလင်းပွင့်ပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အ၀ိဇ္ဖာဝပ်ကျင်းထဲမှာ အိပ်ပျော်နေရာက ကြိုးစားနိုးထကြပြီး အခွင့်ကောင်းကို မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆ အရယူနိုင်ဖို့ "အရှိကို အရှိအတိုင်းသာ"………. ။
9:04 AM | Author: Dhamma Yanant
ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းမွန်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါစေ။ အသုံးမတတ်ရင် အန္တရာယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကယ်ဆေးတောင် သူ့အချိန်အဆအတိုင်း မသုံးတတ်ရင် အဆိပ်ဖြစ်သွားရတာပါ။ 'သုံးတတ်ရင်ဆေး ၊ မသုံးတတ်ရင်ဘေး' ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်းပါပဲ။ မိမိကသာ သုံးတတ်မယ်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့အရာ၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာတွေတောင် အသုံးဝင် အကျိုးရှိလာရပါတယ်။ ဥပမာဆိုရရင် လူကိုသေစေတဲ့ မြွေဆိပ်ကိုပဲ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြရပါတယ်။ ကြောက်စရာ ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ ကျောက်ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ ရောဂါပိုးစတိကိုပဲ ဆေးအဖြစ် ထိုးသွင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ပျက်သွားအောင် လောင်ကျွမ်းပစ်နိုင်တဲ့ မီးတောင်မှ သုံးတတ်မယ်ဆိုရင် သတ္တဝါတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အသုံးဝင်သွားရပါတယ်။ ဒီနည်းတူပါပဲ။ သတ္တဝါတွေကို ပူလောင်စေတတ်တဲ့၊ အပါယ်ဆင်းရဲကို ပို့နိုင်တဲ့ အကုသိုလ် ကိလေသာမီးတွေကိုလည်း မိမိကသာ အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင် အပူမီးတွေ ငြိမ်းသွားရတဲ့အပြင် အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာကိုတောင် ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
တဏှာရာဂစတဲ့ အကုသိုလ် ကိလေသာတွေ ချုပ်ငြိမ်းမှ ရောက်နိုင်တဲ့ အနှိုင်းမဲ့ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရောက်ဖို့ အကုသိုလ် ကိလေသာတွေကို ဘယ်လိုများ အသုံးချရပါ့မလဲ။ အကုသိုလ် ကိလေသာတွေကို အသုံးချလို့ နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါ့မလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ရနိုင်ပါတယ်။ သာဓကများစွာ ရှိတဲ့အထဲက ပါနီယဇာတ်ကို ထုတ်ပြချင်ပါတယ်။ (ဒီဝတ္ထုကို အတော်များများလည်း ဖတ်ဖူး၊ ကြားဖူးပြီး ဖြစ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။) ကာမဝိတက်ကို ကြံစည်မိကြတဲ့ ရဟန်း(၅ဝဝ)ကို အကြောင်းပြုပြီး ကိလေသာဆိုတာ သေးတယ်၊ ငယ်တယ်၊ မပြောပလောက်ဘူးလို့ လျစ်လျူမရှုဘဲ နှိပ်ကွပ်သင့်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရားက ပုံစံပြ ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ရှေးတုန်းက ကာသိတိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် လယ်ထွန်သွားကြပါတယ်။ တစ်ယောက်က ရေဆာလာတဲ့အခါ မိမိရေဘူးထဲကရေ ကုန်သွားမှာစိုးလို့ အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ရေကို ခိုးသောက်လိုက်ပါတယ်။ အလုပ်ပြီးလို့ ညနေချမ်း ရေမိုးချိုး အနားယူပြီးတဲ့အခါ တစ်နေကုန်ပြုမိတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြန်စဉ်းစားတော့ ရေခိုးသောက်မိတဲ့ မကောင်းမှုကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ (မိမိတို့လည်းပဲ တစ်နေ့တာ ပြုမိတဲ့ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုတွေကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီး ကောင်းမှုတွေကို တိုးပွားစေ၊ မကောင်းမှုတွေကို နောင်မဖြစ်ပွားစေရအောင် သံဝေဂပွါး သုံးသပ်တဲ့ အကျင့်လေးထားသင့်ပါတယ်။) အဲဒီလို သတိရလိုက်တဲ့အခါ ဒီခိုးမှုဟာ မိမိကို အပါယ်ထိအောင် ဆွဲချနိုင်ပါလားလို့ ထိတ်လန့်သွားပြီး အဲဒီ့ အကုသိုလ်ကိုပဲ အာရုံပြုပြီး ဝိပဿနာရှုလိုက်တာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ခိုးမှုဆိုတဲ့ အဒိန္နာဒါနကံကို ကျူးလွန်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင် အဲဒီ့အကုသိုလ်ကို အသုံးချပြီး သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ထက် တစ်ဆင့်သာနိမ့်တဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်ခွင့်ရှိသေးရင်…၊ ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သေးရင်…။
နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုက အဲဒီ့ ကာသိတိုင်းရွာငယ်တစ်ခုမှ သူကြွယ်တစ်ယောက်ဟာ မိမိရှေ့က ဖြတ်သွားတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အနက် အမျိုးသမီးကို တပ်မက်သဘောကျလွန်းလို့ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ ကြည့်မိပြီးကာမှ သူတစ်ပါးရဲ့ မယားကို လောဘနဲ့ ကြည့်မိတဲ့ အကုသိုလ်ကြောင့် အပါယ်ကျရတော့မှာပဲလို့ ထိတ်လန့်ပြီး အဲဒီ့အကုသိုလ်ကို အခြေခံပြီး ဝိပဿနာရှုလိုက်တာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကာယကံမှုပြုမှ ကမ္မပထမြောက်တဲ့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံကို စိတ်ကလေးနဲ့တင် ကျူးလွန်မိတာကို အချိန်မီ တားဆီးချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ခံစားရပါတယ်။ အလွန်အတုယူဖွယ် ကောင်းပါတယ်။ (ယခုခေတ်လူများ ဒီလိုသာ စိတ်နဲ့ပြစ်မှားမိရုံနဲ့ သံဝေဂရပြီး ဝိပဿနာရှုလို့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူအတော်များများ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်ကုန်ကြလို့ နန္ဒမူလိုဏ်ဂူတောင် ဆန့်မယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒီ့လို မဆန့်မှာစိုးလို့လည်း မထိတ်လန့်ကြတာ နေမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သာသနာတွင်းကာလမှာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ မပွင့်နိုင်ဘူးလို့ ကြားဖူးတဲ့အတွက် မိမိဘာသာ သံဝေဂရအောင် မပွားကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။)
နောက်တစ်ဦးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ထိုကာသိရွာမှာပဲ သားအဖနှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ထိုခေတ်ကလည်း တောအုပ်တွေထဲမှာ ပြန်ပေးသမားတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ ပြန်ပေးသမားတွေဟာ သားအဖကို ဖမ်းမိရင် သားကို ဖမ်းထားပြီး အဖေကို ငွေပြန်ယူခိုင်းကာ ရွေးစေပါတယ်။ (မိဘမေတ္တာကို သေချာပေါက် တွက်လို့ရပါတယ်နော်။) ညီအစ်ကိုဖြစ်ရင် ညီကိုဖမ်းထားပြီး အစ်ကိုကို လွှတ်ကာ ရွေးစေပါတယ်။ ဆရာတပည့်ဖြစ်ရင် ဆရာကို ဖမ်းထားပြီး တပည့်ကို လွှတ်ပါတယ်။ ပညာကို လိုချင်တဲ့ တပည့်က ဥစ္စာကို ပြန်ယူပြီး ဆရာကို ရွေးရပါတယ်။ အခု ကာသိရွာသား သားအဖနှစ်ယောက်ကိုလည်း ပြန်ပေးသမားတို့က ဖမ်းထားကြပါတယ်။ အဖမ်းများခံရရင် ပြန်ပေးဆွဲခံရမှုမှ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ဘာတော်သလဲမေးရင် ဘာမှမတော်ဘူးလို့ လိမ်ပြောဖို့လည်း တိုင်ပင် ထားကြပြီးသားပါ။ ဒီတော့ တကယ်မေးလာတဲ့အခါမှာလည်း တိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ညာပြောလိုက်ကြပါတယ်။ ပြန်ပေးလက်က လွတ်မြောက်ပြီးလို့ ညချမ်းအခါ မိမိအကြောင်းတွေကို ပြန်တွေးတော့ လိမ်လည်မှုကိုမြင်ပြီး ထိတ်လန့် ဝိပဿနာရှုလိုက်တာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်သွားပါတယ်။ (မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ လင်္ကာချောစေဖို့ မပါမဖြစ် ပါရပါတယ်ဆိုတဲ့ မုသား၊ အကျင့်ပါနေတဲ့ မုသား၊ အကျိုးစီးပွား ပျက်စီးစေတဲ့ မုသား၊ အကျိုးစီးပွား မပျက်စီးစေတဲ့ မုသား စသည်.. စသည် ရေလဲသုံးနေတဲ့ မုသားတွေ များလွန်းလို့ မထူးဆန်းတော့ဘဲ သံဝေဂလည်းမရ၊ ဒန်ဝေဂလည်းမရ ဖျောက်ဖျက်ဖို့လည်း မစဉ်းစား၊ ကြောက်လန့်ဖို့လည်း မတွေးအားကြတော့တာနဲ့ မုသာဝါဒကို အခြေခံတဲ့ ၀ိပဿနာဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးကြပါဘူး။)
အဲ... နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကာသိတိုင်းမှ ရွာစားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ရွာစားက သူ့ရွာမှာ သားငါးမသတ်ရလို့ စည်းကမ်းထုတ်ထားပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သားကောင်တွေကို သတ်ပြီး နတ်ပူဇော်ရတဲ့အခါနဲ့ ကြုံကြိုက်နေပါတယ်။ ရွာသားတွေ စုဝေးပြီး ရှေးထုံးစံအတိုင်း သားသတ်ပြီး နတ်ပူဇော်ခွင့်ပြုဖို့် တောင်းပန်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ရွာစားလည်း ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်း ပြုလုပ်ဖို့ ခွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ခွင့်ရတာနဲ့ လူတွေလည်း သတ်ဖြတ်ပူဇော်ကြပါတယ်။ ရွာစားလည်း မိမိရဲ့ ခွင့်ပြုစကား တစ်ခွန်းကြောင့် သတ္တဝါတွေ သေကြရတယ်ဆိုပြီး နောင်တကုက္ကုစ္စ ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီ့ ပါဏာတိပါတကံနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ နောင်တကိုပဲ ဝိပဿနာရှုလိုက်တာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒီ့ရွာစားလိုပဲ နောက်ထပ် ရွာစားတစ်ယောက် ရှိပါသေးတယ်။ ဒီရွာစားကတော့ သေအရက် ရောင်းဝယ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ သေသောက်သဘင် ကျင်းပရာအခါ ရောက်တော့ လူအပေါင်းက ရွာစားကို ဝိုင်းတောင်းပန်ကြပါတယ်။ ရွာစားလည်း ရှေးထုံးစံဖြစ်နေတော့ မတားမြစ်သာဘဲ ခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ လူတွေလည်း သောက်စားမူးယစ်ပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကြလို့ ကျိုးပဲ့ဒဏ်ရာတွေ ရကုန်ကြပါတယ်။ ဒီလို လူအများ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတာ မိမိရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ပဲဆိုပြီး ရွာစားလည်း နောင်တရမိပါတယ်။ သုရာမေရယကံကို အခြေခံတဲ့ အဲဒီ့နောင်တကို ဝိပဿနာရှုလိုက်တာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်သွားပါတယ်။
(အိမ်တစ်အိမ်၊ ရုံးတစ်ရုံး၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ ရွာတစ်ရွာ၊ မြို့တစ်မြို့၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ... စသဖြင့် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ နေရာတွေမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ အလွန်အရေးပါပါတယ်။ နောက်လိုက်တို့ရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေဟာ ခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာ မှီနေပါတယ်။ နယ်ကျဉ်းသည်ပဲဖြစ်စေ၊ နယ်ကျယ်သည်ပဲဖြစ်စေ မိမိခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကျိုးများများ ဖြစ်ထွန်းစေသင့်ပါတယ်။ ဂုဏ်ရှိ၊ ဂုဏ်ရရန်အတွက် မဟုတ်ဘဲ အများကောင်းကျိုး များများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်သာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးတွေဟာလည်း ဂုဏ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ငွေဆိုတာလည်း ဂုဏ်မဟုတ်ပါဘူး၊ 'အများအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းသည်သာလျှင် ဂုဏ်အစစ်' မည်ပါတယ်။)
ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓါငါးပါးတို့ ဗာရာဏသီပြည်ကို ဆွမ်းခံကြွကြတဲ့အခါ (ဘုရားလောင်း)ရှင်ဘုရင်က ကြည်ညိုလွန်းလို့ ဆွမ်းဘောဇဉ်နဲ့ ပြုစုလုပ်ကျွေးပြီး ရဟန်းပြုရခြင်း အကြောင်းတွေကို မေးမြန်းလျှောက်ထားပါတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အသီးသီးက အကြောင်းအသီးသီးကို ပြောပြကြတဲ့အခါ ပိုမိုကြည်ညို သဒ္ဓါပွားလာတဲ့အတွက် ကာမဂုဏ်တရားတွေကို ဝေးစွာ ရှောင်ကြဉ်ပါတော့တယ်။ မိမိအခန်းထဲက နံရံအဖြူကို ကြည့်ပြီး သြဒါတကသိုဏ်းပွားလိုက်တာ ဈာန်ရသွားပါတယ်။ (ဈာန်၊ မဂ်၊ ဖိုလ်ရဖို့ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင် အားထုတ်ရပါ့မလဲလို့ မေးလေ့ရှိသူများ သတိပြုပါ။) အဲဒီ့လို ဘုရားလောင်း ရှင်ဘုရင်ကြီးက ကာမဂုဏ်ကို အပြစ်မြင်ပြီး ဈာန်ချမ်းသာ ရနေချိန်မှာ ယသော်ဓရာလောင်း မိဖုရားကြီးကတော့ ကာမဂုဏ်ချမ်းသာထက် ကောင်းတဲ့အရာ မရှိဆိုပြီး ကာမဂုဏ်ကို ချီးမွမ်းနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ရှင်ဘုရင်ကြီးက ကာမဂုဏ်နဲ့ ပက်သတ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ကဲ့ရဲ့ပါတယ်။
မြည့်နေအောင်ထက်တဲ့ သန်လျက်နဲ့ အခုတ်ခံရခြင်းထက်၊ ရင်ဝကို လှံနဲ့ အထိုးခံရခြင်းထက် ကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲက ပိုကြီးပါတယ်။
တစ်လံကျော်နက်တဲ့ ရဲရဲတောက်နေတဲ့ မီးကျီးတွင်းထက်၊ နေ့အခါ အလွန်ပူပြင်းတဲ့ နေမင်းထက် ကာမဂုဏ်ဆင်းရဲက ပိုပြီး ပူပြင်းပါတယ်။
ချက်ချင်းသေစေနိုင်တဲ့ အဆိပ်ထက်၊ ကျိုက်ကျိုက်ဆူနေတဲ့ သံရည်ပူ၊ ကြေးရည်ပူထက် ကာမဂုဏ်ဆင်းရဲက ပိုပြီး ပြင်းထန်ပါတယ်။
အဲဒီ့လို ကာမဂုဏ်တွေရဲ့ အပြစ်ကို ပြောပြပြီး အမတ်တွေကို တိုင်းပြည်အပ်ကာ တောတွက် ရသေ့ရဟန်း ပြုသွားပါတယ်။
၀တ္ထုလေးကတော့ ဒါပါပဲ။ ပြောချင်တာကတော့… မိမိတို့ဆိုတာ ရဟန္တာ မဖြစ်သေးတဲ့အတွက် လောဘ၊ မာန စသည်လည်း မကုန်သေးပါဘူး။ အနာဂါမ် မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒေါသလည်း မကုန်သေးပါဘူး။ သောတာပန်, သကဒါဂါမ် မဟုတ်သေးလို့ ဒိဋ္ဌိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာတောင် မကုန်သေးပါဘူး။ ဘာအကုသိုလ်ကိုမှ တရားဝင်မပယ်ရသေးတဲ့ ဇဉ်၊ ဇဉ်လို့မည်နေတဲ့ ပုထုဇဉ်အစစ်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် တစ်နေကုန်မှာ ကုသိုလ်ထက် အကုသိုလ်ပဲ အဖြစ်များတတ်ကြပါတယ်။ အစိုးမရတဲ့ တရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စိတ်ဆိုတာကလည်း အကုသိုလ်တရား မကောင်းမှုများမှာ အလွန်ပဲ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓကတောင် 'ပါပသ္မိံ ရမတိ မနော' လို့ ဟောတော်မူထားခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ သူ့သဘာဝအတိုင်း မကောင်းမှုတွေမှာ အားရပါးရမွေ့လျော်ချင်တဲ့ စိတ်ကို မထိန်းမချုပ် အလိုလိုက်ခဲ့မိလို့ မိမိတို့ဘ၀တွေမှာ မကောင်းမှု အဖြစ်များပြီး ညစ်နွမ်းခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီဘ၀မှာ တရားမှ ရပါဦးမလားဆိုပြီး စိတ်မပျက် အားမလျော့ပါနဲ့။ အသိနောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကောင်းသည်ပဲဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ပဲဖြစ်စေ (ပဉ္စာနန္တရိယကံမှ မဟုတ်ရင်ပေါ့) ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကောင်း၊ အဆိုး သင်္ခါရတရားတွေကို ဝိပဿနာအသိနဲ့ ရှုပွားနိုင်ခဲ့ရင် 'ခုရှု - ခုငြိမ်း' ဆိုတဲ့ တရားတော်ရဲ့ 'အကာလိက' ဂုဏ်တော်နဲ့အညီ ငြိမ်းအေးချမ်းသာမှုကို မိမိတို့ရဲ့ ပါရမီအလျှောက် ခံစားကြရမှာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် စာဖတ်သူများလည်း အပါယ်ကို ခြေလှမ်းပြင်နေတဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အကုသိုလ် ကြီးငယ်မှန်သမျှကို သံဝေဂပွါး ဝိပဿနာရှုပြီး ဆေးအဖြစ် သုံးတတ်နိုင်ကြပါစေ…။
8:42 AM | Author: Dhamma Yanant
Sweeter than comb its sweetness: its delights
Hear the Five Rules aright:
Kill not-for pity’s sake and lest you slay
By greed, or force, or fraud, what is his own.
Touch not thy neighbour’s wife, neither commit
(The Light of Asia)
ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ငါးပါးသီလဟာ အဓိကအရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး စောင့်ထိန်းရမယ့် ကမ္ဘာစောင့်တရား ငါးပါးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ကို လူရယ်လို့ သတ်မှတ်ပေးတာ ငါးပါးသီလပါ။ ငါးပါးသီလမှ မရှိရင် လူဆိုတာ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ငါးပါးသီလကို "လူ့သိက္ခာ" လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာတာနဲ့ ငါးပါးသီလဆိုတာလည်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အလိုလို ရောက်ရှိလာပြီးသားပါ။ ဘုရားရှင်ကို အာရုံပြုပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သံဃာတော်တွေ (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ထံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် "အဟံ ဘန္တေ တိသရဏေန သဟ ပဉ္စသီလံ သမာဓိယာမိ" စသဖြင့် စိတ်က၊ နှုတ်က ရွတ်ဆိုခံယူဆောက်တည်မှသာ လူ့သန္တာန်မှာ ငါးပါးသီလ ၀င်ရောက်ကိန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ့လို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှာ ခံယူဆောက်တည်သည်ပဲဖြစ်စေ၊ မခံယူ မဆောက်တည်သည်ပဲဖြစ်စေ ငါးပါးသီလကတော့ လူဖြစ်လာတာနဲ့ အလိုလို ၀င်ရောက်တည်ရှိနှင့်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၂၀)ပြည့်ပြီးတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ရဟန်းခံပေးတဲ့အခါ ရဟန်းဖြစ်တာနဲ့ တပြိုင်နက် (၂၂၇)သွယ်သော ရဟန်းသိက္ခာတွေဟာ အဲဒီ့ရဟန်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အလိုလို ၀င်ရောက်သွားသလို ငါးပါးသီလဆိုတာလည်း လူဖြစ်လာတာနဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အလိုလို ၀င်ရောက်လာတော့တာပါ။ ရဟန်းဖြစ်လာသူဟာ ရဟန်းသိက္ခာတွေကို သိလျက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မသိလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ပါးပါးကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မိရင် အဲဒီ့သိက္ခာပုဒ်အတွက် ရဟန်းသိက္ခာ ပြုတ်ကျသွားသလို လူဖြစ်လာသူတိုင်းအဖို့လည်း ငါးပါးသီလကို သိလျက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မသိလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ပါး၊ နှစ်ပါး၊ သုံးပါး၊ လေးပါး ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မိရင် အဲဒီ့ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် ဆိုင်ရာသိက္ခာ ကျပါတယ်။ ငါးပါးစလုံးကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မိလိုက်ရင်တော့ လူသိက္ခာ လုံးဝ ပြုတ်ကျသွားတော့တာပါ။ လူလို့ မခေါ်ထိုက်တော့ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ဟာ အခွင့်မသာတဲ့အတွက် ဒါနကို တစ်နှစ်မလုပ်မိလို့လည်း လူသိက္ခာ ပြုတ်ကျမသွားပါဘူး။ ရှစ်ပါး၊ ကိုးပါး၊ ဆယ်ပါး စတဲ့ ဥပုသ်သီလတွေ၊ သမထဘာဝနာ၊ ၀ိပဿနာဘာဝနာတွေ ဆယ်နှစ်မစောင့်မိ၊ မလုပ်မိလို့လည်း လူသိက္ခာ ပြုတ်ကျမသွားပါဘူး။ ငါးပါးသီလကိုတော့ ဆယ်နှစ်ကို မဆိုထားပါနဲ့။ တစ်လမလုံရင် တစ်လ၊ တစ်ရက်မလုံရင် တစ်ရက်၊ အယုတ်ဆုံး တစ်စက္ကန့် မလုံခြုံရင်တောင် တစ်စက္ကန့် လူသိက္ခာ ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ ဥပမာဆိုရရင် တစ်နေ့ (၂၄)နာရီရှိတဲ့အထဲမှာ (၆)နာရီ မူးယစ်သောက်စားနေရင် (၆)နာရီ သိက္ခာကျပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး တစ်စက္ကန့် အရက်မူးနေရင် တစ်စက္ကန့် သိက္ခာကျသွားပါတယ်။
ငါးပါးသီလကိုသာ ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဥပုသ်စောင့်သုံးဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ (၂၂၇)သွယ်သော ရဟန်းသိက္ခာပုဒ်တွေကို စောင့်သုံးဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သီလမှန်သမျှထဲမှာ ငါးပါးသီလဟာ အခြေခံအုတ်မြစ်ကြီးလို တည်ရှိနေတာပါ။ ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင် ငါးပါးသီလကို လွန်ကျူးမိပြီး လူသိက္ခာ ပြုတ်ကျရတာပါ။ သောတာပန်အစ ဘုရား၊ ရဟန္တာအဆုံး အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဟာ သိက္ခာရှိတဲ့လူ အစစ်တွေပါ။ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ ငါးပါးသီလကို မလွန်ကျူးကြပါဘူး။ လွန်ကျူးရင်လည်း ဘုရား၊ ရဟန္တာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ (သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ် အရက်သောက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ အယူကို သတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ သီလစင်ကြယ်မှ စိတ်စင်ကြယ်ပါမယ်။ စိတ်စင်ကြယ်ပါမှ အယူစင်ကြယ်ပြီး ဘာဝနာလမ်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်လျှောက်နိုင်ပါမယ်။ အဲဒီ့လို လျှောက်နိုင်ပါမှလည်း အရိယာစခန်းကို ရောက်တာပါ။ ရတနာသုံးပါးအပေါ်မှာ အသက်နဲ့လဲ ဆည်းကပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ သောတာပန်လိုမျိုး ပုဂ္ဂိုလ်က ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အခြေခံအဆင့်သာဖြစ်တဲ့ ဒီသိက္ခာပုဒ်ကို ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ မချိူးဖောက်တော့ပါဘူး။)
ငါးပါးသီလဆိုတာ ခါးဝတ်ပုဆိုးလိုပါပဲ။ လူတွေမှာ ခါးဝတ်ပုဆိုး အမြဲတမ်း ဖုံးလွှမ်းထားမှပဲ တင့်တယ်ပါတယ်။ အ၀တ်ဗလာဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုမှ မတင့်တယ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ။ ငါးပါးသီလဟာလည်း လူမှာ အမြဲတည်ရှိနေမှပဲ တင့်တယ်ပါတယ်။ လွန်ကျူးဖောက်ဖျက်မိရင် ဖောက်ဖျက်မိသမျှ အချိန်တိုင်းမှာ တင့်တယ်ခြင်း ကင်းနေမှာပါ။ ငါးပါးသီလဟာ ဦးခေါင်းနဲ့လည်း တူပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ လက်၊ ခြေစတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု ချို့ယွင်းပြတ်ပိုင်းသွားရုံနဲ့ အသက်မသေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဦးခေါင်းပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် သေရတော့မှာပါ။ ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ငါးပါးသီလဟာ ဒီလောက်ထိ အရေးကြီးပါတယ်။
အဲဒီ့ ငါးပါးသီလဟာ လူတိုင်းရဲ့သန္တာန်မှာ အသီးသီး တည်ရှိနေကြတာပါ။ အဲဒီ့လို တည်ရှိရာမှာ အန္ဓဗာလ ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ ငါးပါးသီလထက် ကလျာဏပုထုဇဉ်တွေရဲ့ ငါးပါးသီလက၊ အဲဒီ့ထက် သမထဘာဝနာ ပွါးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ငါးပါးသီလက၊ အဲဒီ့ထက် ၀ိပဿနာဘာဝနာ ပွါးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ငါးပါးသီလက၊ အဲဒီ့ထက် ၀ိပဿနာ ဥာဏ်စဉ်တွေပေါ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ငါးပါးသီလက၊ အဲဒီ့ထက် မဂ်ဥာဏ်၊ ဖိုလ်ဥာဏ် ပေါ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ငါးပါးသီလက၊ အဲဒီ့ထက် ဖလသမာပတ် ၀င်စားနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ငါးပါးသီလက၊ အဲဒီ့ထက် နိရောဓသမာပတ် ၀င်စားနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ငါးပါးသီလက အဆင့်ဆင့် သာလွန်မွန်မြတ်ကြပါတယ်။
လူတိုင်း လူတိုင်း သိက္ခာရှိသူများသာ ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးပါးသီလကိုတော့ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များ လုံအောင် စောင့်ထိန်းမိကြပါသလဲ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်တော်ဟာ (ဗျာဒိတ်ခံပြီးသည်မှနောက်) မမှန်သောစကားကို ဘယ်တော့မှ မပြောဖူးလို့ လက်ျာရစ်ခွေနေတာပါ။ ဆွဲဆန့်ရင် ၂-တောင်လောက်ရှည်တဲ့ အဲဒီမွေးရှင်တော်ရဲ့အကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ အာဏာစက် ထက်ခြင်းပါ။ မိမိပြောစကားကို ဘယ်သူမှ မပယ်ရှားနိုင်ပါဘူး။ ဇာတ်တော်တွေထဲမှာ ပြန်ကြည့်ရင် ဘုရားလောင်းဟာ ပုထုဇဉ်အဖြစ် ဘဝပေါင်းများစွာမှာ ပါဏတိပါတလည်း ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူခိုးလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံလည်း ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အရက်သမားလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ အဲ... မုသာဝါဒကံကိုတော့ ဘယ်ဘဝမှာမှ မကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ပုထုဇဉ်တွေ အကျိုးလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ သီလကို ပိုင်ပိုင်ကြီး ဆောက်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။ မိမိတို့ကတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ တပည့်သားတွေ ဖြစ်နေတာတောင်မှ "မုသားမပါ လင်္ကာမချော" ဆိုတဲ့ စကားကို တွင်တွင်ကြီး အသုံးပြုရဲကြပါတယ်။ အမြဲတမ်း အမှန်တရားကိုချည်းသာ ပြောမယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလွန်ကမောက်ကမဖြစ် ဒုက္ခပတ်လည်ဝိုင်းရကြောင်းကိုလည်း စကားနဲ့တစ်မျိုး စာနဲ့တစ်ဖုံ တင်ပြရယ်ပွဲဖွဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်က ငါးပါးသီလကိုသာ လုံအောင်စောင့်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် လိုတရဆိုတဲ့ စကားထက်တောင်မှ သာလွန်ပြည့်စုံချမ်းသာကြရတာပါ။ မိမိကမှ သီလကို တကယ်စောင့်ရင် သီလကလည်း မိမိကို သေချာပေါက် ပြန်စောင့်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများလည်း ဒီလောက် အရေးကြီးလှတဲ့ ငါးပါးသီလကို အချိန်တိုင်း လုံမိကြပါရဲ့လား။ တစ်စက္ကန့် မလုံတိုင်း တစ်စက္ကန့်စာ လူသိက္ခာ ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သိက္ခာရှိတဲ့လူအစစ် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ငါးပါးသီလကိုသာ မကျိုး၊ မပေါက်၊ မပြောက်၊ မကျားအောင် စောင့်ထိန်းပါလို့ပဲ မှာကြားချင်ပါတယ်။
article | comments (2)
5:50 PM | Author: Dhamma Yanant
အမှတ်တမဲ့ ငိုက်နေတဲ့ ဒီခန္ဓာ
အချိန်နဲ့ ဇရာ ပေါင်းပြီး
ဒီလိုနဲ့ပဲ အိုကြ နာကြ သေခဲ့ကြ
သြော်… ဆက်ရဦးမယ်လေ နောက်ဘဝ…။
နတ်သမီး နတ်သား ဘွားခနဲများလား
ငရဲအိုးထဲ ကားခနဲ သွားမလား
(ဟား..) ဘယ်မှာများလဲ ဒို့ဘ၀တွေရဲ့ အာမခံတရား…။
(ဒါတွေကို) ဘယ်သူကများ အာမခံချက် ပေးပါ့မလဲ…။
သံဝေဂ မရလောက်အောင်ကို ပေါ့ဆ
ရုန်းမထခဲ့လို့ သုံးမရခဲ့တာလို့ သိရင်
(ခုဘ၀တွင်ပဲ) အတန်တန် ကြိုးစားကြစို့လေ…။
poem | comments (0)
12:20 PM | Author: Dhamma Yanant
သတ္တဝါတွေဆိုတာ ဘဝများစွာသံသရာ ကျင်လည်နေကြရာမှာ ဆွေမျိုး မတော်စပ်ဖူးသူရယ်လို့ မရှိကြပါဘူး။ မိဘနဲ့ သားသမီးအဖြစ်၊ လင်နဲ့ မယားအဖြစ်၊ မောင်နဲ့ နှစ်မအဖြစ်၊ ဆရာနဲ့ တပည့်အဖြစ်၊ အရှင်နဲ့ ကျွန်အဖြစ် စသဖြင့် မရေမတွက်နိုင်အောင် ဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြတာချည်းပါပဲ။ မဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တော်စပ်ပုံမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ အနည်းနဲ့ အများပဲ ကွာပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပုံစံမျိုးစုံ ကြုံခဲ့ပြီးသားချည်းပါ။
မိဘနဲ့ သားသမီးအဖြစ် ဘဝများစွာ ကြုံတွေ့ကြရဖူးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နီးကပ်တဲ့ ဘဝမှာ မိဘနဲ့ သားသမီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြင်မြင်ချင်း မိဘနဲ့ သားသမီးအရင်းလိုပဲ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီနည်းတူပါပဲ။ လင်နဲ့ မယားအဖြစ် ဘဝများစွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နီးကပ်တဲ့ ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တော်စပ်ခဲ့ဖူးရင် (၅၂၈)ထက်ပိုတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ အလိုလို ပေါ်ပေါက်လာတော့တာပါပဲ။ မောင် နှစ်မ သံယောဇဉ် စတာတွေဟာလည်း ဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ။
"အချစ်မှာ အကြောင်းမရှိဘူး" လို့ လောကလူသားတွေ ပြောဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီ့စကား အလွန်မှားပါတယ်။
(၁) အတိတ်ဘဝမှာ အတူတကွ နေထိုင်ဖူးခြင်း (ပုဗ္ဗေဝ သန္နိဝါသ)
(၂) ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (ပစ္စုပ္ပန္န ဟိတ )
ဒီအကြောင်း (၂)ပါးကြောင့် သတ္တဝါတွေ မြင်လျှင်မြင်ချင်း ချစ်မိခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာကြရတာပါလို့ ဓမ္မပဒမှာ ဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူထားပါတယ်။
အဲဒီ့ အဓိက အကြောင်း(၂)ပါးကို မသိတဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကို ရုပ်ရည်လှပလို့၊ ချမ်းသာလို့၊ ပညာတော်လို့၊ စိတ်ထားကောင်းလို့၊ ဂုဏ်ရှိလို့၊ အစွမ်းအစရှိလို့၊ ၊ ရိုးဖြောင့်လို့၊ အလုပ်အကိုင်ကောင်းလို့ ချစ်မိသွားရပါတယ် စသဖြင့် ခေါင်းစဉ်တပ် အကြောင်းပြချက် ပေးကြည့်ကြပြီး ဘာခေါင်းစဉ်မှ ရှာမရတဲ့အခါကျတော့ "အချစ်မှာ အကြောင်းမရှိဘူး" လို့ ကြွေးကြော်လိုက်ကြတော့တာပါ။
အချစ်မှာ မျက်စိမရှိရတာကလည်း ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ပါပဲ။ ကိုယ့်ရေစက်နဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်ဆုတောင်းနဲ့ကိုယ် ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ မလိုက်ဖက်စွာ တွဲစပ်မိသွားတာ မြင်ရတဲ့အခါ အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဘူးလို့ ဆိုမိတတ်ကြတာပါ။ သတ္တ၀ါတွေရတဲ့ ဘယ်အကျိုးမဆို ပစ္စုန်ပ္ပန်သက်သက်ကို ကွက်ကြည့်ရင်သာ မတူ မတန်၊ မလိုက်ဖက်ဘူး ထင်ရတာပါ။ အတိတ်သံသရာအကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် သိပ်ကို တူတန် လိုက်ဖက်ပါတယ်။
သားသတ်မုဆိုးကို ကြိုက်မိတဲ့ သောတာပန် သူဌေးသမီးတို့၊ သူခိုးကို ကြိုက်မိတဲ့ ကုဏ္ဍလကေသီတို့၊ ကျွန်နဲ့ လိုက်ပြေးတဲ့ ပဋာစာရီတို့ဆိုတာ အတိတ်က အကြောင်းတရားတွေကြောင့် မတူညီတဲ့ ဘဝတွေနဲ့ ပေါင်းဖက်မိခဲ့ကြတာပါ။ လောကလူတွေ သတ်မှတ်လေ့ရှိကြတဲ့ မတူမတန် မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဘဝဘဝက ဆက်စပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့်သာ အတားအဆီး အခက်အခဲတွေ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ အချစ်အတွက် အသက်ပင်သေသေဆိုပြီး ပေါင်းဖက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြတာပါ။
ချစ်ရက်နဲ့ ကံအကြောင်းမသင့်လို့ လမ်းခွဲရသူတွေ၊ မချစ်ဘဲနဲ့ ကံစွက်ပြီး ပေါင်းဖက်ရသူတွေ ဆိုတာဟာလည်း မိမိတို့ ပြုမိခဲ့ကြတဲ့ ကံစီမံရာအတိုင်း ခံကြစံကြရတာပါ။ ကံစီမံရာအတိုင်း ဖြစ်နေကြရသူတွေအတွက် မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ အခြေအနေကို မကျေမနပ်ဖြစ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ ပစ္စုပ္ပန်ကံ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကွက်မကြည့်ဘဲ အတိတ်ကံ၊ အတိတ်ဘဝတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး စိတ်ချမ်းသာအောင်နေသင့်ပါတယ်။
'ငါနဲ့ သူနဲ့ ဘာကွာလို့လဲ' 'ငါက သူ့ထက် သာတာပဲ' 'ငါက သူ့အောက် ဘာများလျော့နေလို့လဲ' စသဖြင့် ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးရသူက ကိုယ့်ထက် သူတစ်ပါးကို ပိုအရေးပေးနေရင် ဒေါမနဿပွါးတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်နဲ့က ဘယ်လောက်တောင် ဘ၀တွေနီးခဲ့မှန်း မသိ၊ ဒါကို မသိနိုင်တဲ့ကိုယ်က ဒီဘ၀မှ လာတွေ့ပြီး မောင်ဦးအခေါ်ခံချင်လွန်းနေပြန်ရင်လည်း ကိုယ်ပဲ စိတ်ဆင်းရဲ အကုသိုလ်ပွါးရပါမယ်။ ဇာတ်တော်တွေထဲမှာ ရှင်ဘုရင် မြတ်နိုးလွန်းတဲ့ မိဖုရားကို မိဖုရားခေါင်ကြီးက မနာလိုဖြစ်ပြီး ပျက်စီးအောင် ကြံမိတာတွေဟာလည်း ဒီအကြောင်းတွေကို မမြင်တတ်ခဲ့လို့ပါ။
အဲဒီ့လိုပါပဲ။ ကိုယ်က ကောင်းနေပါရက်နဲ့ ကိုယ့်ကို အကြောင်းမဲ့ မုန်းတီးနေသူတွေနဲ့ ကြုံရရင်လည်း စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လှတာဆိုပြီး ဖက်ပြိုင်ပြီးတောင် အာဃာတထား ရန်ငြှိုးဖွဲ့မိတတ်ကြပါတယ်။ အမှန်က ကိုယ်က ဒီဘ၀မှာတော့ ကောင်းပေမယ့် အတိတ်ဘ၀တွေမှာ ဘယ်လောက်တောင်မှ သူ့အကျိုးစီးပွါးကို သိသိကြီးနဲ့တစ်မျိုး၊ အမှတ်တမဲ့တစ်မျိုး ခွင့်မလွှတ်နိုင်လောက်အောင် ပျက်စီးစေခဲ့ဖူးမှန်း မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံလာရရင်လည်း အတိတ်အကြောင်းတွေကို မှန်းဆသံဝေဂယူရပါမယ်။ ကိုယ်က အကြွေးပေးစရာတွေ ရှိနေတယ်လို့ပဲ နှလုံးသွင်းပြီး သူ့အငြှိုးကို ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ အကြွေးကျေအောင်ဆပ်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားရပါမယ်။ မီးကို မီးချင်းငြှိမ်းလို့ မရပါဘူး။ အရင် မျက်လုံးဖွင့်ပြီး မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့သူက သူတော်ကောင်းပါပဲ။ သူမတော်တာ၊ မကောင်းတာ မကြည့်ဘဲ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ တော်နိုင်၊ ကောင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။
သတ္တဝါတွေရဲ့ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းဆိုတာ ဘယ်သူမှ ဖန်တီးလို့ မရပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ အကြောင်းမဲ့ ချစ်နေ၊ မုန်းနေတယ် ထင်ရလောက်အောင်ကို ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်း ရှာမရတတ်ပေမယ့် အတိတ်ဘဝက ချစ်စ၊ မုန်းစတွေကိုပါ ထည့်သွင်းရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတစ်ပါးကိုလည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်၊ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်သက်သာရာ ရသွားပါလိမ့်မယ်။
အဲ….. တကယ် အေးငြိမ်းချမ်းသာမှု အစစ်ကိုမှ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မချစ်ပါ မမုန်းပါနဲ့...။
မချစ်တတ်ရင် = ချစ်သူနဲ့ ခွဲရလို့ဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခမီး ငြိမ်းပါတယ်။
မမုန်းတတ်ရင် = မုန်းသူနဲ့ တွဲရလို့ဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခမီး ငြိမ်းပါတယ်။
ဒီတော့ မချစ်ဘဲ၊ မမုန်းဘဲ နေနိုင်ကြပါ့မလား။ နည်းနည်းနေနိုင်ရင် နည်းနည်း ဒုက္ခငြိမ်းသွားပါမယ်။ အများကြီး နေနိုင်ရင် အများကြီး ဒုက္ခငြိမ်းသွားပါမယ်။ လုံးဝနေနိုင်သွားရင်တော့ လုံးဝ ဒုက္ခငြိမ်းသွားတော့မှာပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် စာဖတ်သူတွေလည်း မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိဆွေမျိုးသားချင်း၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အလိုမကျတဲ့ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ကြရရင် နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ကြပြီး မချစ်ရင် မနေနိုင်သူတွေကနေ မချစ်တတ်၊ မမုန်းတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်သွားနိုင်ကြပါစေ…။
9:00 PM | Author: Dhamma Yanant
ဒီနေ့လား နက်ဖြန်လား မသိ
(ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာ) ဘာများ လိုအပ်ခဲ့လို့လဲ
အရာရာ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေခဲ့တာပါ…။
ငါ… ဘာလို့များ တုံးအခဲ့ပါလိမ့်
အမှတ်မရှိ အလိုက်မသိတတ်တဲ့ ငါက
ဆင်းရဲသစ်တွေကိုပဲ အခါခါ သာယာမိ
အရှုံး အမြတ်ကို သုံးသပ်ကြည့်တာ
ရုန်းမရတဲ့ ကြိုးတွေကပဲ ရစ်ပတ်
ငါ… ရှုံးချက်တွေလည်း မနာချင်တော့ပါဘူး
အဆုံးမရှိတဲ့ ဘ၀ပင်လယ်က ရုန်းထွက်လို့
အေးချမ်းတဲ့ သံသရာဖျက်လမ်းကိုပဲ ဆက်လှမ်းပါရစေတော့…။